ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ခွေးဘီလူးယာဉ် မီးလောင် - Yangon Media Group
ယာဉ်ပေါ်တွင် ယာဉ်မောင်း အပါအဝင် ခရီးသည်အမျိုးသား သုံးဦးနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ လိုက် ပါလာပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ် ရာရခဲ့ကြောင်း ဘောနီအမြန်လမ်းမ ကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ယာဉ်တစ်စီးလုံးနီးပါး မီး လောင်ခဲ့ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ တွက်ချက်နေ ကြောင်း ဘောနီအမြန်လမ်းမကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ဘောနီအမြန်လမ်းမကြီး ရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ”သွား နေတုန်း ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြစ်ပြီးတော့ ခွေးဘီလူးယာဉ်မီးလောင်တာ။ခရီးသည်တစ်ဦးက ကားပေါ်က ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ အပူလောင် တာ။ ကားကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ ကို ငှားပြီးတော့လာတာ။ ခရီး သည်တင်အငှားယာဉ်ပေါ့”ဟု ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားခဲံ သည်။ ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘောနီအမြန်လမ်းမကြီး ရဲစခန်း မှ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှု ပုဒ်မ-၂၇၉၊ နာကျင်စေမှုပုဒ်မ ၃၃၇၊ မီးလောင်မှုပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့် ယာဉ်မောင်း ကိုချစ်ကောင်းကို အမှု ဖွင့်အရေးယူထားသည်။
ပြည်သူများထံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဈေးသက်သာစွာ ရောင်းချနိုင်ရန် စွမ်းအင်မူဝါဒကို ပြန်လည်သံ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် မြေယာရရှိနိုင်မှုကို များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် မြေယာဘဏ်ဆိ??
ဓာတ်သတ္တု လုပ်ကွက်အသစ် လျှောက်ထားမှုကို ဇူလိုင် ၂၆ ရက်မှ စတင်၍ လက်ခံသွားမည်
မုံရွာမြို့ရှိ ဂျပန် စစ်သင်္ချိုင်းဟောင်းသို့ ဂျပန်လူမျိုးများ လာရောက်လေ့လာ